မျက်နှာလေးက နုဖတ်နေတာပဲလို့ အပြောခံချင်ချင်သူများအတွက် – သတင်းစုံ
မျက်နှာလေးက နုဖတ်နေတာပဲလို့ အပြောခံချင်ချင်သူများအတွက်
ကိုယ်လိမ်းနေကျ ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးပါ။ အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့က ကိုယ့်အကိုတစ်ယောက်နဲ့ video call ပြောရင်း ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့ စိတ်ကူးရတယ်ဆိုပါတော့…..
ကိုယ့်အကိုအမတွေကို ကိုယ့်လိုလှစေချင်တဲ့စေတနာကတော့အဓိကပေါ့နော်….ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်အကိုအမတွေထဲမှာ မျက်နှာမှာ အဆီဖုလေးတွေ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ နဲ့ မျက်နှာအရေးအကြောင်းထင်တာတွေ တော်တော်များများတွေ့ရလို့ပါ
ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးမပြောခင် ကိုယ့်အကြောင်းကို အရင်ပြောပါစေ…ကိုယ်ကတောသူပီပီ နယ်မှာနေတဲ့ တလျောက်လုံးသနပ်ခါးပဲလိမ်းပါတယ် ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ၃နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Cosmetics ဝယ်လိမ်းဖူးတာဆိုလို့ Bella ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှ စုစုပေါင်း ၂ကြိမ်ရယ်ပါ ….
ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလဲ ခရီးသွားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ရတာ အဆင်ပြေလို့ပါ ကျန်တဲ့ရုံးချိန်တွေမှာတော့ သနပ်ခါးပဲအများဆုံးလိမ်းဖြစ်ပြီး ပွဲတွေရှိတဲ့အခါနဲ့ စိတ်ရတဲ့အခါကျရင် ကိုယ့်အမရဲ့ Cosmetics တွေယူလိမ်းပါတယ်….
သနပ်ခါးပဲလိမ်းလိမ်း မိတ်ကပ်ပဲလိမ်းလိမ်းညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ရေချိုးပြီးတာနဲ့ အမြဲလိမ်းဖြစ်တဲ့အရာ ထောပတ်စေ့ရယ်ပါ။ဝယ်ရတာလဲလွယ်ကူသလို အကုန်အကျလဲနဲတာမို့ နေ့တိုင်းလိုလိုလိမ်းဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိမ်းရလဲဆိုတော့ ကိုယ်တို့ထောပတ်သီးစားကြတဲ့အခါ အတွင်းသားလေးတွေ ယူလိုက်ရင် အထဲကအစေ့လေးကျန်ပါမယ်။လူအများစုက ဒီထောပတ်စေ့တွေကို
ဘယ်ဈေးကြီးတဲ့ Cosmetics မှဝယ်သုံးစရာမလိုပဲ ကိုယ်တို့မျက်နှာကို အများကြီး လှသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မသိတော့ အလွယ်တကူလွင့်ပစ်တတ်ကြတယ်
အဲဒီအစေ့ကို မလွှင့်ပစ်ပဲ အရင်ဆုံးအစေ့ပေါ်ကထောပတ်သီးအစလေးတွေကို စင်အောင်ရေဆေးပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် သူ့ကိုနေလှမ်းထားလိုက်ပါ။၂ရက်လောက်လှမ်းထားပြီးရင် ထောပတ်စေ့ပေါ်ကအပေါ်ခွံလေးကြွလာတဲ့အခါ ဖယ်ပစ်လိုက်ပါ
ဘယ်လောက်ထိလှမ်းရလဲဆိုရင် ထောပတ်စေ့လေး အလယ်၂ခြမ်းကွဲပီး သံချေးရောင်ထပြီး အရမ်းကျွတ်ဆတ်ဆတ်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လိမ်းလို့ရပါပြီ။ ၃ပတ်နဲ့ ၄ပတ်ဝန်းကျင်လောက်လှမ်းရပါမယ်။
တခါတလေ အပေါ်ခွံသံချေးရောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ အတွင်းအစိုဓာတ်မကုန်သေးရင် လိမ်းလို့မရသေးပါဘူး။လုံးဝခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ညတိုင်းအိပ်ခါနီးတိုင်း ခပ်ပါးပါးလေးသွေးလိမ်းလို့ရပြီ
သူ့မှာ သနပ်ခါးနဲ့တူတာတခုက ကိုယ်တို့သနပ်ခါးတုံးမှာ အပေါ်ကအပွေးတွေသွေးလိမ်းကြတဲ့အခါ အတွင်းခေါက်ထက်ပိုပြီးဝါဝါလေးနဲ့လှသလို ထောပတ်စေ့မှာလဲ သူ့အပေါ်ယံဘေးသားတွေက အတွင်းသားထက် အသားကိုပိုချောပြီးဝင်းပြောင်စေတယ်
ကိုယ် တခါတလေအိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါမျိုးမှာ အဖုလေးတွေထွက်ရင် အပေါ်ယံလေးတွေချည်းသွေးလိမ်းရင် နောက်နေ့မနက်ထရင်လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။ယုံမလားတော့မသိဘူး ….
အရမ်းသိသာတာတခုကအဆီဖုလေးတွေပါ ။ကိုယ်ကသနပ်ခါးလိမ်းတာများပေမဲ့ တခါတလေ အဆီဖုလေးတွေ ထွက်တတ်ပါတယ် ။ကိုယ်တော့ထောပတ်စေ့အားကိုးနဲ့ မျက်နှာကို တခြားဘာပစ္စည်းမှ ထွေထွေထူးထူးခုထိဝယ်မသုံးဖူးပါဘူး
ကိုယ်မျက်နှာမှာ ထွက်သမျှ ဘာပဲလာလာ ထောပတ်စေ့ပဲသွေးလိမ်းပါတယ်။ပုံမှန်ဆို အတွင်းသားကိုသွေးလိမ်းပြီးခရီးသွားလို့ အသားအရည်အရမ်းပျက်စီးတဲ့အခါ အပြင်သားတွေချည်းသွေးလိမ်းပါတယ်။လိမ်းပြီး နောက်နေ့မနက်မျက်နှာသစ်တာနဲ့ သိသိသာသာပြောင်းလဲတာပါ
အသိအမတယောက်ကို သူ့မျက်နှာမှာတင်းတိပ်တွေတွေ့လို့ ကိုယ်ညွှန်းလိုက်တော့ အရေးအကြောင်းတွေပါ တော်တော်သက်သာတယ်လို့ပြောတယ် အကိုတယောက်ကတော့ ဝက်ခြံတွေသက်သာတယ်လို့ပြောတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ကတော့ အဆီဖုလေးတွေ လုံးဝပျောက်သွားတယ် နောက်တခုက နေ့တိုင်းလိမ်းပါများလာရင် အသားအရည်လေးတွေတင်းပြီး ပါးလေးတွေဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်လာတယ်
အသားအရည်လေးကြည်ပြီး ဘာမှလိမ်းမထားရင်တောင် အလိုလိုကြည့်ကောင်းနေတာရယ် တခြားသဘာဝပစ္စည်းတွေလဲ လိုင်းပေါ်မှာ မကြာခဏတွေ့ပေမဲ့ ဒီတခုကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့မို့ ကိုယ့်အကိုအမတွေကို ခုလိုပိုက်ဆံအကုန်အကျသက်သာပြီး
ဘာ side effect မှမရှိပဲ သဘာဝအသီးတွေနဲ့ လှရအောင် ထောပတ်စေ့လေးကို စမ်းလိမ်းကြည့်ပါလို့အကြံပြုပါရစေနော်…။original write
မ်က္နွာလေးက နုဖတ်နေတာပဲလို့ အျေပာခံခ်င္ခ်င်သူမ်ားအတြက်
ကိုယ္လိမ်းနေက် ထောပတ်စေ့အေကြာင်းလေးပါ။ အခ်ိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ပေးစေခ်င္ပါတယ်။မေန့က ကိုယ့်အကိုတစ်ယောက္နဲ့ video callျေပာရင်း ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့ စိတ္ကူးရတယ္ဆိုပါတော့…..
ကိုယ့်အကိုအမေတြကို ကိုယ့္လိုလွေစခ်င္တဲ့စေတနာကေတာ့အဓိကေပါ့နော်….ကိုယ့်သူငယ္ခ်င်းတြေနဲ့ ကိုယ့်အကိုအမေတြထဲမွာ မ်က္နွာမွာ အဆီဖုလေးတြေ တင်းတိပ် မွဲ့ျေခာက် ဝက်ခြံ နဲ့ မ်က္နွာအေရးအေကြာင်းထင္တာတြေ တော်တ္မော်ားမ်ားတြေ့ရလို့ပါ
ထောပတ်စေ့အေကြာင်းလေးမျေပာခင် ကိုယ့်အေကြာင်းကို အရင်ျေပာပါစေ…ကိုယ္ကေတာသူပီပီ နယ္မွာနေတဲ့ တေလ်ာက္လုံးသနပ္ခါးပဲလိမ်းပါတယ် ။ရန္ကုန်ရောက်ပြီး ၃နွစ်ကေ်္ကာာလေလးအတြင်းမွာ ကိုယ္ပိုင် Cosmetics ဝယ္လိမ်းဖူးတာဆိုလို့ Bella ပေါ်ပြီးတဲ့နောက္မွ စုစုပေါင်း ၂ကြိမ်ရယ္ပါ ….
ဝယ်ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေကြာင်းရင်းကလဲ ခရီးသြားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ရတာ အဆင်ျေပလို့ပါ က်န္တဲ့ရုံးခ်ိန်တြေမွာတော့ သနပ္ခါးပဲအမ်ားဆုံးလိမ်ျးဖစ်ပြီး ပြဲတြေရွိတဲ့အခါနဲ့ စိတ်ရတဲ့အခါက်ရင် ကိုယ့်အမရဲ့ Cosmetics တြေယူလိမ်းပါတယ်….
သနပ္ခါးပဲလိမ်းလိမ်း မိတ္ကပ္ပဲလိမ်းလိမ်းညဘက်အိမ်ျပန်ရောက္တဲ့အခါ ရေခ်ိုးပြီးတာနဲ့ အျမဲလိမ်ျးဖစ္တဲ့အရာ ထောပတ်စေ့ရယ္ပါ။ဝယ်ရတာလဲလြယ္ကူသလို အကုန်အက်လဲနဲတာမို့ နေ့တိုင်းလိုလိုလိမ်ျးဖစ္ပါတယ်
ဘယ္လိုလုပ်ပြီးလိမ်းရလဲဆိုတော့ ကိုယ္တို့ထောပတ်သီးစားကြတဲ့အခါ အတြင်းသားလေးတြေ ယူလိုက်ရင် အထဲကအေစ့လေးက်န္ပါမယ်။
လူအမ်ားစုက ဒီထောပတ်စေ့တြေကို ဘယ်ဈေးကြီးတဲ့ Cosmetics မွဝယ်သုံးစရာမလိုပဲ ကိုယ္တို့မ်က္နွာကို အမ်ားကြီး လွသြားအောင္လုပ်ပေးနိုင္တယ္ဆိုတာ မသိတော့ အလြယ္တကူလြင့္ပစ္တတ်ကြတယ်
အဲဒီအေစ့ကို မလွှင့္ပစ္ပဲ အရင္ဆုံးအေစ့ပေါ်ကေထာပတ်သီးအစေလးတြေကို စင်အောင်ရေဆးပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် သူ့ကိုနေလွမ်းထားလိုက္ပါ။၂ရက်လောက္လွမ်းထားပြီးရင် ထောပတ်စေ့ပေါ်ကအေပ်ါခြံလေးကြလာတဲ့အခါ ဖယ္ပစ္လိုက္ပါ
ဘယ်လောက္ထိလွမ်းရလဲဆိုရင် ထောပတ်စေ့လေး အလယ်၂ျခမ်းကြဲပီး သံခေ်းရောင္ထပြီး အရမ်းကျတ္ဆြတ္ဆတ်လောက်ျဖစ်နေပြီဆိုရင္လိမ်းလို့ရပါပြီ။ ၃ပတ္နဲ့ ၄ပတ်ဝန်းက်င်လောက္လွမ်းရပါမယ်။
တခါတေလ အေပ်ါခြံသံခေ်းရောင်ျဖစ်နေပမဲ့ အတြင်းအစိုဓာတ္မကုန်သေးရင် လိမ်းလို့မရေသးပါဘူး။လုံးဝျေခာက်သြားပြီဆိုရင်တော့ ညတိုင်းအိပ္ခါနီးတိုင်း ခပ္ပါးပါးလေးသြေးလိမ်းလို့ရပြီ
သူ့မွာ သနပ္ခါးနဲ့တူတာတခုက ကိုယ္တို့သနပ္ခါးတုံးမွာ အေပ်ါကအေပြးတြေသြးလိမ်းကြတဲ့အခါ အတြင်းခေါက္ထက္ပိုပြီးဝါဝါလေးနဲ့လွသလို ထောပတ်စေ့မွာလဲ သူ့အေပ်ါယံဘေးသားတြေက အတြင်းသားထက် အသားကိုပိုခေ်ာပြီးဝင်ျးေပာင်စေတယ်
ကိုယ် တခါတေလအိပ်ရေးပ်က္တဲ့အခါမ်ိုးမွာ အဖုလေးတြေထြက်ရင် အေပ်ါယံလေးတြေခ်ည်းသြေးလိမ်းရင် နောက်နေ့မနက္ထရင္လုံးဝေပ်ာက်သြားပါတယ်။ယုံမလားတော့မသိဘူး ….
အရမ်းသိသာတာတခုကအဆီဖုလေးတြေပါ ။ကိုယ္ကသနပ္ခါးလိမ်းတာမ်ားပေမဲ့ တခါတေလ အဆီဖုလေးတြေ ထြက္တတ္ပါတယ် ။ကိုယ်တော့ထောပတ်စေ့အားကိုးနဲ့ မ်က္နွာကို တျခားဘာပစ္စည်းမွ ထြေထြထူးထူးခုထိဝယ္မသုံးဖူးပါဘူး
ကိုယ္မ်က္နွာမွာ ထြက်သမျွ ဘာပဲလာလာ ထောပတ်စေ့ပဲသြေးလိမ်းပါတယ်။ပုံမွန္ဆို အတြင်းသားကိုသြေးလိမ်းပြီးခရီးသြားလို့ အသားအရည်အရမ်းပ်က္စီးတဲ့အခါ အျပင်သားတြေခ်ည်းသြေးလိမ်းပါတယ်။လိမ်းပြီး နောက်နေ့မနက္မ်က္နွာသစ္တာနဲ့ သိသိသာသျာေပာင်းလဲတာပါ
အသိအမတေယာက္ကို သူ့မ်က္နွာမွာတင်းတိပ်တြေတြ့လို့ ကိုယ်ညွှန်းလိုက်တော့ အေရးအေကြာင်းတြေပါ တော်တော်သက်သာတယ္လို့ျေပာတယ် အကိုတေယာက္ကေတာ့ ဝက်ခြံတြေသက်သာတယ္လို့ျေပာတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်တြေ့ကေတာ့ အဆီဖုလေးတြေ လုံးဝေပ်ာက်သြားတယ် နောက္တခုက နေ့တိုင်းလိမ်းပါမ်ားလာရင် အသားအရည်လေးတြေတင်းပြီး ပါးလေးတြေဝင်းဝင်ျးေပာင်ျေပာင်လေျးဖစ္လာတယ်
အသားအရည်လေးကြည်ပြီး ဘာမွလိမ်းမထားရင်တောင် အလိုလိုကြည့်ကောင်းနေတာရယ် တျခားသဘာဝပစ္စည်းတြေလဲ လိုင်းပေါ်မွာ မကြာခဏေတြ့ပေမဲ့ ဒီတခုကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ်တြေ့မို့ ကိုယ့်အကိုအမေတြကို ခုလိုပိုက္ဆံအကုန်အက်သက်သာပြီး
ဘာ side effect မွမရွိပဲ သဘာဝအသီးတြေနဲ့ လွရေအာင် ထောပတ်စေ့လေးကို စမ်းလိမ်းကြည့္ပါလို့အကျြံပုပါရေစေနာ်…။
အိမ်မှာ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံရတတ်တယ် ဆိုသူများအတွက်